Maamulaha Meizu wuxuu yiri Meizu 16 wuxuu imaan doonaa dabayaaqada bisha Luulyo ama horaanta bisha Ogosto | Androidsis
Hadda, Meizu 16 waa aaladaha sida weyn loo filayo shirkadda, oo ah soosaarayaal xan iyo mala awaal aan dhamaad lahayn oo aan sidoo kale ka helno tilmaamo iyo xaqiijin dhowr ah oo laga helay Jack Wong, oo ah agaasimaha guud ee shirkada oo, maanta, xaqiijiyay qaar ka mid ah faahfaahinta ku saabsan imaatinka labadan markab ee waaweyn Wuxuu ku sameeyay tan iyada oo loo marayo golaha bulshada, oo ah wax uu si firfircoon ugu hawlanaa siyaabo aan caadi ahayn dhawaanahan, sidoo kale wuxuu ku tilmaamay, wararka kale, in Meizu X8 ayaa ka fiicnaan doona Xiaomi Mi 8 SE.
Kahor intaan la shaacin tan, Jack Wong ayaa tilmaamay in boosteejooyinkan la heli doono si loo iibsado kahor Ogosto 26 oo hore u xaqiijisay in qiimaha taleefannada casriga ahi ka badnaan doonin 4.000 yuan (515 euro qiyaastii.). Si aan mugdi ku jirin, wuxuu tilmaamay in si rasmi ah loo soo bandhigi doono dhammaadka bishan ama horraanta soo socota.
Dhawaan, wuxuu sidoo kale xaqiijiyay taas Meizu 16 ee soo socota ayaa hayn doona qalabka dhegaha ee 3.5mm Jack. Sawirkii dhawaan soo ifbaxay ee Meizu 16 wuxuu soo jeedinayaa in kaameradda gadaal la dhigi doono booska dhexe ee kore iyadoo leh laba dareemayaal kamaradood oo si toos ah loo adkeeyay.
Sawirada casriga ah ee xaday, dareeraha faraha lama arko, taas oo macnaheedu noqon karo taleefanka ayaa la imaan doona shidma sawirka faraha shaashadda ah sida horeyba loo qiyaasay. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in mid ka mid ah noocyada 'Meizu 16' uu ku shaqeynayo Qualcomm's Snapdragon 845 oo taleefanka uu yeelan doono ilaa 8GB oo RAM ah.
Ku saabsan qaybta sawirada, Dareem hore ayaa soo jeedisay in telefoonada lagu qalabeyn doono 12 megapixel + 20 megapixel resolution dual dual camera setup. Si kastaba ha noqotee, daadad kale ayaa soo jeedinaya in qaabeynta kamaradaha laba-geesoodka ah laga heli karo oo keliya Meizu 16, halka Meizu 16 Plus laga yaabo inuu ku yimaado qalab 12-megapixel + 12-megapixel + 20-megapixel sedex kamaradood ah. Labada taleefan ayaa lagu xantaa inay leeyihiin 20 megapixel sensor hore.
Waxaa taas la socda, shirkadda ayaa sidoo kale bilaabi doonta Meizu X8, kaas oo la sheegay inuu processor-ku wato Octa-core Snapdragon 710 dhawaan ay soo saartay shirkadda Qualcomm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Maamulaha Meizu wuxuu sheegay in Meizu 16 uu imaan doono dabayaaqada bisha Luulyo ama horaanta bisha Ogosto